Wasaaradda Warfaafinta oo dib u howlgalisay Kooxdii Kubadda Cagta Madbacadda Qaranka | Baydhabo Online
Wasaaradda Warfaafinta oo dib u howlgalisay Kooxdii Kubadda Cagta Madbacadda Qaranka
Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa 28-sano ka dib markii ugu horaysay dib u soo noolaysay kooxdii Kubadda Cagta ee Madbacadda Qaranka, taas oo lagu xasuusto ciyaarihii cajiibka ahaa ee barisamaadkii soo bandhigi jirtay kooxdaan.
Munaasabadda dib u howlgelinta Naadiga Madbacadda Qaranka oo hoostagta wasaaradda Warfaafinta, ayaa waxaa goob-joog ka ahaa wasiirka Warfaafinta, Wasiirk ku xigeenka Wasaaradda, ku simaha Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, ahna wasiir ku xigeenka Wasaaradda, Masuuliyiinta Xiriirka Kubadda Cagta, Maareeyaha Madbacadda Qaranka iyo qeybaha ay naadiga ka kooban tahay.
Guddoomiyaha Naadiga Madbacadda Qaranka Cumar Maxamuud Nuur (Mugaanbe) ayaa ballan qaaday in ay si joogta ah ula shaqeyn doonaan wasaaradda Warfaafinta.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya C/raxmaan Yuusuf Cumar (Cadaala) ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku dadaali doonto sidii loo tayeyn lahaa Naadiga Macbadda Qaranka.
Wasiir ku xigeenka Dhalilnyarada iyo Cayaaraha Axmed Cumar Isloow iyo wasiir ku xigeenka Warfaafinta C/raxmaan Iidaan Yoonis ayaa labaduba sheegay in iskaashiga badan laga yeesho sidii loo xoojin lahaa awoodda Naadiga.
Munaasabadda inta ay socotay ayaa lagu kala saxiixdey heshiis saddex geesood ah uu u dhaxeeyey wasaaradda, Naadiga iyo xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, kuna aaddan dib u howlgelinta Naadiga Madbacadda Qaranka.